जगदुल्लाको डीपीआर अन्तिम चरणमा – Sajha Bisaunee
जगदुल्लाको डीपीआर अन्तिम चरणमा
हेमन्त केसी । ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०७:३६ मा प्रकाशित
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको यो आयोजना डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । देशका राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका र ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको छ वर्षभित्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि फागुन २८ गतेबाट मुआब्जा वितरणकार्य सुरु भएसँगै आयोजना निर्माणको गति सुरु भएको हो । अब दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणको कामसमेत छिट्टै सुरु गर्ने आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । विद्युत उत्पादन गृहस्थल मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल डोल्पामा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख सापकोटाले जनाए । पहिलो चरणमा इलस्थित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छन् भने दोस्रो चरणमा अर्थात् चैत १४ गते काइगाउँमा वितरण गर्ने भनिएकामा ‘लकडाउन’का कारण रोकिएको छ । इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी पाँच लाख ५० हजार र काइगाउँमा एक सय ८७ रोपनी एक सय घरधुरीको प्रतिरोपनी पाँच लाख १५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो । कूल तीन सय ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि अहिले भौगोलिक विकटताका कारण एक सय ६ मेघावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
प्राविधिक टोलीको सल्लाहअनुसार क्षमता घटाएर काम सुरु गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन (डिपिआर) काम पूरा भए पनि लकडाउनका कारण सार्वजानिक गर्न नपाएको आउने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । २० महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार काम पूरा नभएपछि अहिले छ महिना थपेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्ने छ भने जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा ड्याम निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा दुई सय ५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । अर्धजलाशयका रूपमा निर्माणकार्य थालिएको आयोजना छ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
करिब सात दशमलव एक किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित तीन सय मिटरभित्र रहेको विद्युत उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २३ मिटर उचाइको जलाशययुक्त ड्याम निर्माण हुनेछ भने उक्त ड्यामको एक सय मिटर चौडाइ हुनेछ । छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जीनियरिङले २७ करोडमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीले हाल्न पाउनेछन् । सरकार आफैं र स्थानीयवासीलाई सेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अहिले विद्युत उत्पादन गृहको माटो जाँचका लागि तीन मिटरभित्र सुरुङ निर्माणका लागि चैत २ गते बोलपत्र आह्वान भएर छिट्टै काम सुरु हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमाना त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माणका लागि आयोजनाले पहल सुरु गरेको छ । त्यस्तै इलमा समेत पुल निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणीदेखि इलसम्मको सडक ट्रयाक छिटो खोलेमा कामसमेत आयोजनाको कामसमेत छिटो हुने आयोजनाको भनाइ छ । काइगाउँमा परीक्षणका लागि चार वटा प्वाँल प्रतिप्वाँल ३५ मिटरको हिसाबले निर्माण गरी जाँचको काम भएको छ ।
त्यस्तै एक सय ६० मिटर जमिनमुनिका दुई प्वाँल इलमा निर्माण गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवास र कार्यालय भवन निर्माण बोलपत्र आह्वानको काम सुरु गर्न लागिएको बताएको छ । अर्धजलाशययुक्त रहेको यो आयोजनाको कूल लागत रू. २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युतका लागि इलस्थित फेदीखोलाबाट दुई मेगावाट र काइगाउँस्थित स्थानीय खोला दुई मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्भाव्यताको काम सुरु भएको छ । (रासस)